News – Page2– MZB FAMILY
မီးဘေးသင့်ခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးကပြည်သူတွေကို အိမ်သုံးပစ္စည်းနဲ့အလှူငွေတွေ လှူဒါန်းပေးပြီး ကူညီမှုတွေပေးနေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
ပုရိသ ပရိသတျ တှေ ရဲ့အားပေး ခဈြခငျမှုတှေ ကို အမြားဆုံး ရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ခြော အေးဝတျရညျသောငျးကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှု တှေ အခိုငျအမာ နဲ့ လြှောကျလှမျး နသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။မအေးသောငျး လို့ အမြားက ခဈြစနိုး ချေါကွတဲ့ သူမ ကတော့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲ ကွီးမှာ ရဲရဲ ရငျ့ရငျ့ …
အလှူရှင်တွေရဲ့စေတနာကိုသိတတ်ပြီး သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးကာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနေကြတဲ့ လူငယ်တစ်စုရဲ့ဗီဒီယို
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် လူငယ်အများစုကပဲ ရှေ့ဆုံးကနေ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဦးဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်ထွက်လာရင် အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှန်းသိသော်လည်း လူငယ်တွေကတော့ကြောက်သွေးမပါကြဘဲ သတ္တိအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာကြောင့် အရမ်းလေးစားစရာကောင်းကြပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိဆိုရင် ကျဆုံးသူရဲကောင်းတွေလည်း အယောက်(၃၀၀)ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက်တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်း ပြည်သူတွေက အဟာရပြည့်မယ့်စားစရာ၊သောက်စရာတွေကိုအမြဲလှူဒါန်းပြီး လိုအပ်သမျှအကူအညီတွေကိုလည်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့ သူတို့ကိုကူညီဖေးမပေးပြီး အစားအသောက်တွေလှူဒါန်းပေးတဲ့စေတနာရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်း သိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း လူငယ်တစ်စုက ရှေ့တန်းကနေ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံရင်ဆိုင်နေရင်း ခေါက်ဆွဲကြော်လာကျွေးတဲ့အလှူရှင်ရှိလို့ အတူတူမျှဝေစားသောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ သူတို့အတွက် စားစရာ၊သောက်စရာတွေလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ အလှူရှင်တွေကို “ကျန်းမာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ”ဆိုပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး အန္တရာယ်တွေကြားထဲမှာတောင် အလှူရှင်တွေရဲ့စေတနာကို သိတတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကလည်း သူတို့အတွက်တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေကူညီဖေးမပေးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကြောင့် ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source&Photo Credit: Original Uploder Video Credit: Original Uploder
မကျဆုံးခင်ကတည်းက အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်နေတာကြောင့် ကြိုတင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းရဲ့သေတမ်းစာ…
လက်ရှိအချိန်ထိအသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံအတွက်အားကိုးအားထားပြုလို့ရတဲ့ ပညာတတ်လူငယ်လေးတွေလည်း အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာရတဲ့ အဖိုးတန်သားသမီးလေးတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ရင်ကွဲမတတ်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၇.၃.၂၀၂၁)ရက်နေ့ကဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသီဟတင်ထွန်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းက ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံမှ လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းကျဆုံးသွားတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကလည်း နှမျောတသဖြစ်ပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းရဲ့မိခင်ကတော့ သားလေးအတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီး “စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားလိုက်ပါပြီ နိုင်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်”လို့လည်း သားရဲ့အသိ၊မိတ်ဆွေတွေကိုမှာလိုက်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းကလည်း အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်နေတာကြောင့် သူမကျဆုံးခင်ကတည်းက သေတမ်းစာကို ကြိုတင်ရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သေတမ်းစာထဲမှာ သူတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် “ကျွန်တော့်ကို ဂုဏ်ယူပါ၊အကြာကြီး စိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့”ဆိုပြီး မိခင်ကိုမှာခဲ့သလို့ ချစ်သူအတွက်လည်း ဒီလိုမျိုးအရင်သွားနှင့်ခဲ့လို့ အားနာနေတဲ့အကြောင်းကို စာထဲမှာ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်း မလျော့သောဇွဲနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ မှာခဲ့တဲ့ သေတမ်းစာစာရွက်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source&Photo Credit: Original Uploder Unicode လကျရှိအခြိနျထိအသကျပေးသှားခဲ့ရတဲ့ ပွညျသူတှထေဲမှာ နိုငျငံအတှကျအားကိုးအားထားပွုလို့ရတဲ့ ပညာတတျလူငယျလေးတှလေညျး အမြားအပွားပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။မိဘတှအေနနေဲ့လညျး မိမိတို့ကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျလာရတဲ့ အဖိုးတနျသားသမီးလေးတှကေို ဆုံးရှုံးလိုကျရလို့ ရငျကှဲမတတျဖွဈနကွေတာဖွဈပါတယျ။ (၂၇.၃.၂၀၂၁)ရကျနကေ့ဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကိုသီဟတငျထှနျးက လူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျရငျး အသကျပေးသှားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာသီဟတငျထှနျးက ပွငျဦးလှငျဆေးရုံမှ လကျထောကျဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။အသကျပေါငျးမြားစှာကိုကယျတငျပေးနတေဲ့ ဒေါကျတာသီဟတငျထှနျးကဆြုံးသှားတဲ့အတှကျ ပွညျသူတှကေလညျး နှမြောတသဖွဈပွီး ယူကွုံးမရဖွဈနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာသီဟတငျထှနျးရဲ့မိခငျကတော့ သားလေးအတှကျ ဂုဏျယူနပွေီး “စိတျကိုပိုငျးဖွတျထားလိုကျပါပွီ နိုငျမယျ့အခြိနျကိုစောငျ့နပေါတယျ”လို့လညျး သားရဲ့အသိ၊မိတျဆှတှေကေိုမှာလိုကျသေးတာဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာသီဟတငျထှနျးကလညျး အသကျကိုစှနျ့လှတျပွီးလမျးပျေါထှကျနတောကွောငျ့ သူမကဆြုံးခငျကတညျးက သတေမျးစာကို ကွိုတငျရေးသားထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သတေမျးစာထဲမှာ သူတဈခုခုဖွဈခဲ့ရငျ “ကြှနျတေျာ့ကို ဂုဏျယူပါ၊အကွာကွီး စိတျမဆငျးရဲပါနဲ့”ဆိုပွီး မိခငျကိုမှာခဲ့သလို့ ခဈြသူအတှကျလညျး ဒီလိုမြိုးအရငျသှားနှငျ့ခဲ့လို့ အားနာနတေဲ့အကွောငျးကို စာထဲမှာ ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အတူတူရငျဆိုငျခဲ့ကွတဲ့ ပွညျသူတှကေိုလညျး မလြော့သောဇှဲနဲ့ဆကျလကျရငျဆိုငျသှားဖို့ မှာခဲ့တဲ့ သတေမျးစာစာရှကျလေးကိုပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ Source&Photo Credit: Original Uploder
အလှမယ်ဟန်လေးကတော့ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်နေဆဲကာလမှာကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို speak out လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဟန်လေးရဲ့ စိတ်ထားကတော့ လေးစားစရာပါပဲနော်။ မနေ့က ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲမှာလည်း များစွာသော ပရိသတ်တွေကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်များကလည်း မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးကိုကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြခဲ့တဲ့ ဟန်လေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ယူနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဟန်လေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လူအများရဲ့ရှေ့မှာရပ်ကာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအား ပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူနေကြောင်းကို ဝေမျှလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ” ကျွန်မ ဘဝမှာမြန်မာပါဆိုပြီး ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လူအများရှေ့မှာ ရပ်တည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်…အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်မအတွက်အခမ်းနားဆုံးသော အချိန်ပါဘဲ🙏 MissGrandMyanmar2020 HL ” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပါ ဝေမျှလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ Source-Han Lay’s Facebook Account Photo Crd-Dew Natthapong
Mandalay က ခေါငျးကိုကညျြထိတဲ့ ၅နှဈ ကလေး ရဲ့ဦးလေးနဲ့ contact ရပါတယျ။ ” ကနြျောတို့ ဆုတောငျးပွညျ့ပါတယျ ခငျဗြား!! ကလေး အသကျအန်တရာယျ မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ operation အောငျမွငျပွီး အခွအေနကေောငျးပါတယျ “လို့ ပွောပါတယျ။ ပြျောလိုကျတာ ကလေးရေ!!! အသကျရှငျပေးလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ( ညနကေ နရောတိုငျး confirm ဆိုလို့ ငိုယိုပွီး …
ပြည်သူတွေကိုဦးဆောင်ရင်းနဲ့ အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိတာဝန်ကျေခဲ့တဲ့ လားရှိုးမြို့က ရှေ့နေကျောင်းသားလေး
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိတိုင်အောင် အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေထဲမှာ အနာဂတ်ရဲ့ကြယ်ပွင့်တွေလည်း ပါရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ရှေ့နေ၊ကျောင်းသားစတဲ့ ပညာတတ်လူငယ်လေးတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးအတွက် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့ကဆိုရင်လည်း လားရှိုးမြို့မှာ နောက်ဆုံးနှစ် ဥပဒေကျောင်းသားတစ်ဦး ကျဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ မိုင်းမင်းနောင်ဖြစ်ပြီး အသက် (၂၂) …
ဒိုင်းလေးကာပြီး ကျည်ထိသွားတဲ့သူကို တစ်ယောက်တည်းတက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ သူပါကျည်ထိမှန်ကာ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦး
ပြည်သူလူထုကတော့ အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေခဲ့ရင်တောင် အချင်းချင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေက ရက်ပေါင်း(၅၀)ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီအခြေအနေကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ တီထွင်ကြံဆနိုင်မှုတွေကလည်း ချီးကျူးစရာကောင်းလောက်အောင် အရမ်းတော်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်း မိမိအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲ အသက်ပေးကာကွယ်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေကို ပြည်သူလူထုက လေးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းက မိမိရဲ့သွေးရင်းသားရင်းလိုမျိုး သက်မှတ်ထားကြပြီး အပြန်အလှန်ကူညီဖေးမပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကဆိုရင်တော့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ပြုလုပ်ကြတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖြိုခွင်းခံရလို့ ကျဆုံးသူအရေအတွက်လည်း အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။မိတ္ထီလာမြို့မှာဆိုရင်တော့ ကျည်ထိသွားတဲ့သူကို သူရဲကောင်းတစ်ဦးက ဒိုင်းလေးကာပြီး တစ်ယောက်တည်းတက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ သူပါကျည်ထိမှန်ပြီးကျဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တိအပြည့်နဲ့ ကျည်ဆံတွေကြားထဲကနေ တက်ဆွဲရဲတဲ့ သူရဲကောင်းရဲ့ လက်မှာတော့ “စနေရဲ့ဘဝ”ဆိုပြီး တက်တူးရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာပဲ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းကို ပြည်သူတွေကလည်း လေးစားပြီးဦးညွှတ်ဂါရဝပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ဦးကတော့ အများအကျိုးကိုသယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source&Photo Credit: Original Uploder Unicode ပွညျသူလူထုကတော့ အရေးပျေါအခွအေနနေဲ့ကွုံနခေဲ့ရငျတောငျ အခငျြးခငျြးကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ပွညျသူတှကေ ရကျပေါငျး(၅၀)ကြျောကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ ဒီအခွအေနကေို စညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ရငျဆိုငျနကွေဆဲဖွဈပါတယျ။ လူငယျတှရေဲ့စိတျအားထကျသနျမှုနဲ့ တီထှငျကွံဆနိုငျမှုတှကေလညျး ခြီးကြူးစရာကောငျးလောကျအောငျ အရမျးတျောကွပါတယျ။ဒါ့အပွငျလညျး မိမိအသကျကိုပဓာနမထားဘဲ အသကျပေးကာကှယျနကွေတဲ့သူရဲကောငျးတှကေို ပွညျသူလူထုက လေးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ပွညျသူလူထုအခငျြးခငျြးက မိမိရဲ့သှေးရငျးသားရငျးလိုမြိုး သကျမှတျထားကွပွီး အပွနျအလှနျကူညီဖေးမပေးနကွေတာဖွဈပါတယျ။ မနကေ့ဆိုရငျတော့ မွို့နယျအသီးသီးမှာ ပွုလုပျကွတဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို ဖွိုခှငျးခံရလို့ ကဆြုံးသူအရအေတှကျလညျး အမြားအပွားရှိခဲ့ပါတယျ။မိတ်ထီလာမွို့မှာဆိုရငျတော့ ကညျြထိသှားတဲ့သူကို သူရဲကောငျးတဈဦးက ဒိုငျးလေးကာပွီး တဈယောကျတညျးတကျဆှဲတဲ့အခြိနျမှာ သူပါကညျြထိမှနျပွီးကဆြုံးသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သတ်တိအပွညျ့နဲ့ ကညျြဆံတှကွေားထဲကနေ တကျဆှဲရဲတဲ့ သူရဲကောငျးရဲ့ လကျမှာတော့ “စနရေဲ့ဘဝ”ဆိုပွီး တကျတူးရေးထိုးထားတာဖွဈပါတယျ။စနနေမှေ့ာပဲ ကဆြုံးသှားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောငျးကို ပွညျသူတှကေလညျး လေးစားပွီးဦးညှတျဂါရဝပွုနကွေတာဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့အသကျအန်တရာယျကို ဂရုမစိုကျဘဲ ရဲစှမျးသတ်တိအပွညျ့ရှိတဲ့သူရဲကောငျးတဈဦးကတော့ အမြားအကြိုးကိုသယျပိုးဆောငျရှကျရငျး အသကျပေးသှားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပျတှကေိုဝမျးနညျးကွကှေဲစှာနဲ့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ Source&Photo Credit: Original Uploder
လမ်းပေါ်က ကလေးတွေဗိုက်ဆာနေကြပြီဆိုပြီး အိမ်ကိုသုံးဘီးနဲ့ပြန်ကာ ထမင်းနဲ့ဟင်းအိုးတွေယူလာပြီးကျွေးလိုက်တဲ့ စေတနာရှင်ပြည်သူတစ်ဦး
ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ကြပြီး မြို့နယ်တိုင်းနီးပါးမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကို ယူဆောင်လာပြီး လမ်းပေါ်ထွက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင် ပြည်သူတွေက ရက်ပေါင်း(၅၀)ကျော် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘယ်သူမှအားမလျော့ကြဘဲ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်လမ်းပေါ်ထွက်နေကြပေမယ့် မမောမပန်းကြဘဲ အားအင်အပြည့်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြလို့ အရမ်းလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ Gen Zတွေ ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လည်း စေတနာရှင်ပြည်သူတစ်စုက စားစရာတွေကို အမြဲလှူဒါန်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်းစေတနာရှင်ပြည်သူတစ်ဦးက ကလေးတွေဗိုက်ဆာနေကြပြီဆိုပြီး အိမ်ကိုသုံးဘီးနဲ့ပြန်ကာ ထမင်းနဲ့ဟင်းအိုးတွေကိုယူလာပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကလည်း လမ်းဘေးမှာပဲ ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကို အားရပါးရစားနေကြတာဖြစ်လို့ လှူရတဲ့စေတနာရှင်အနေနဲ့လည်း ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။အခုလိုမျိုး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်ရှိပြီး ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းတတ်တဲ့ပြည်သူတွေကြောင့် လမ်းပေါ်မှာရင်ဆိုင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရှေ့သို့ချီတက်နေနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိမှာရှိတာလေးကို စေတနာအပြည့်နဲ့ ကျွေးမွေးနေတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးရဲ့အလှူကို သာဓုခေါ်ရင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source&Photo Credit: Original Uploder
အန္တရာယ်တွေကြားကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ မရမကသွားပြီး ကျည်ထိနေတဲ့လူနာကို ကူညီကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများ
အခုချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ရင်တွင်းဆန္ဒတွေကို ဆက်လက်ထုတ်ဖော်နေဆဲဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလည်း သေဆုံးမှုတွေ တစ်နေ့တခြား မြင့်တက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင် အားလုံးက ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ဆေးအဖွဲ့က တတ်နိုင်သလောက် ကုသကယ်တင်ပေးသလို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ …
အသားဒိုင်းလေးကိုင်ပြီး ခံတပ်ကိုလာကူပိတ်ပေးတဲ့ အံ့မခမ်း သူရသတ္တိနဲ့ Gen Alpha ကလေးငယ်
သပိတျစဈကွောငျးကို အကွမျးဖကျတှေ လိုကျမဖွိုနိုငျအောငျ အတားအစီးတှေ လာကူပိတျပေးတဲ့ g-alphaလေး? သူ့ကိုယျသူ ကာကှယျဖို့ အသားဒိုငျးနဲ့ ဓားတိုလေးနဲ့ သတ်တိကတော့ မခဘေူးဗြာ အသားဒိုငျးလေးမှာရေးထားသေးတယျ UN တဲ့ (အတားတှေ ပိတျတုနျးက ဓာတျပုံမရိုကျလိုကျရလို့ သူအိမျပွနျတဲ့အခြိနျလှမျးရိုကျလိုကျတာ ) Galpha လေးစားစရာပါ ကလေးရယျ ဘေးအန်တရာယျကငျးပါစေ ကလေးရေ လုလငျငသှေး G alphaသို့ဦးညှတျခွငျး လုလငျငယျသှေးG Alphaလေး …